मार्केट – Page3– Lokpati.com
नेकपा नेपाल प्रहरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड केपी शर्मा ओली सरकार मृत्यु अपराध राशिफल प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चितवन अमेरिका नेपाली काँग्रेस पक्राउ
न्यूयोर्क। बहुमूल्य धातु सुनको भाउ ९ वर्षकै उच्च विन्दुमा उक्लिएको छ। बुधवारको कारोबार सुनको भाउ प्रतिऔंस १ हजार ८०० डलरमाथि उक्लिएको छ। सुनको भाउले यो स्तर पार गरेको सन् २०११ यता यो पहिलो पटक हो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र दरमा…
काठमाडौं, १९ असार। आज पनि सुनको मूल्य घटेको छ। लगातार दोस्रो दिन पनि सुनको मूल्य घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ५०० रूपैयाँले घटेको छ। बिहिबार प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भएको…
सुनको मूल्य एक लाख नजिक पुग्यो
काठमाडौं, १५ असार। बिहेको सिजन सकिँदै गर्दा स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य एक लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा…
एकैदिन सात सयले बढ्यो सुन, तोलाको कति ?
काठमाडौं, १४ असार। आइतबार छापावाला सुनको मूल्यले ९१ हजार ३ सयमा पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाएको छ। यो सुनको मूल्य हाल सम्मकै उच्च हो। शुक्रबार प्रतितोला ९० हजार ६ सयमा कारोबार भएको सुन एकै दिन ७ सयले बढेर नयाँ रर्कड बनाएको हो। त्यसैगरी,…
काठमाडौं, ९ असार। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य मंगलबार सामान्य घटेको छ। सोमबार प्रतितोला ९१ हजारमा कारोबार भएको सुन आज भने ४ सय रुपैयाँले घट्दै ९० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यावसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार आज…
एकैदिन ७ सयले बढ्यो सुन, तोलाको कति ?
काठमाडौं, ७ असार। साताको पहिलो दिन आइतबार सुन सात सयले बढेको छ। गत शुक्रबार प्रतितोला ८९ हजार ९ सयमा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज आइतबार एकै दिन ७ सयले बढेर छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै,त्यसैगरी, तेजाबी…
अनिश्चितकालसम्म सेयर बजार स्थगित
काठमाडौं, ६ असार। लकडाउन विस्तारै खुकुलो बन्दै गए पनि सेयर बजार कारोबार भने अनिश्चित भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले असार ७ गतेदेखि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि धितोपत्रको दोस्रो बजारको कारोबार स्थगन गरेको हो। नेप्सेले शनिबार सूचना…
निरन्तर बढ्दै सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं, ५ असार। नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले दिएको जानकारीअनुसार आज सुनको मूल्य १ सय रुपैयाँले बढेर कारोबार भइरहेको छ। शुक्रबार सुनको मूल्य प्रतितोला ८९ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको महासंघले…
आज अमेरिकी डलरको भाउ कति पुग्यो ?
काठमाडौं, ४ असार। आजका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर १२१ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १२२ रुपैयाँ २४ पैसा तोकिएको छ। पछिल्ला दिनहरुमा डलरको भाउ उच्च विन्दुमा अडिइरहेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव पर्दा लगानीकर्ताको ध्यान डलरतर्फ…
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, एकै दिन १ हजारले बढ्यो
काठमाडौं, ३० जेठः स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोलामा ९० हजार नजिक पुगेको छ । सुनको भन्सारदर बढाएसँगै सुनको मूल्य बढ्न गएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढ्दै जानु र बजेटमार्फत भन्सारदर बढेकाले सुनको मूल्य बढ्न गएको व्यवसायीको…